प्रकाशित मिति: आश्विन 12, 2075
लहान – रौतहट जिल्लाको गरुडा नगरपालिका वडा नं.२ ( गोरही गोठी –८ ) वस्ने प्रमोद कुुमार सहनी उर्फ प्रमोद पिया गायन क्षेत्रमा लोक प्रिय बन्दै जनताको दिल दिलमा बस्न सफल भएको प्रमोद पिया संग गरिएका कुराकानीको संक्षिप्त अंश ।
- तपाई आफनो परिचय दिनुहोस ?
मेरो नाम प्रमोद पिया (प्रमोद कुमार सहनी) हो मेरो घर रौतहट जिल्लाको गरुडा नगरपालिका वडा नं. २ गोराही गोठी गाँउमा हो ।
- तपाईको परिवारिक स्थिति के हो ?
म एउटा गरीब परिबारमा जन्मेका हु । परिबारिक स्थिती भन्नु पर्दा कमजोर नै छ । मेरो घरमा हजुर आमा , बुवा , आमा र बहिनी ३ वटा र भाई २ वटा र म गरी जम्मा ८ जनाको सदस्य रहेको छ ।
- तपाई कति सम्म शिक्षा हासिल गर्नु भएको हो ?
म पल्स टु साईन्स गरेका हु । म रौतहट जिल्लाको चन्द्रनिगाहपुर जनज्योती मा.वि. बाट गरेका छु । म एसएलसी बि.स.२०६९ सालमा दिएको छु ।
- तपाई यो गायन क्षेत्रमा कसरी लाग्नु भो ?
म यो गायन क्षेत्रमा सानै देखी नै रुचि राखेका थिए । कहि कतै स्टेज प्रोगा्रमा तथा अन्य कार्यक्रम हुन्थयो भने म हेर्न जान थिए । सानै देखि म गायन क्षेत्र तर्फ लाग्ने सोच भएर म लागेको हु । मेरो हजुर बाबा गायन क्षेत्रमा लागेको थिए । त्यही भएर म लागेका हु ।
- तपाई अहिले यहाँ सम्म पुग्नुमा कस्को सहयोग बढी रहेको छ ।
सर भन्नु पर्दा म अभारी छु मलाई जन्म दिने आमा बुवा प्रति जन्म तथा संस्कार दिई आज मालाइृ यहाँ सम्म आउनुमा अहोरात दिन खुन पसिना बगाई मलाई यो मंजि ल सम्म ल्याई दिएकोमा म यो कर्ज यो जन्म के साथ जन्म सम्म चुकाउ सकदिन र मलाई माया गर्ने सम्पूर्ण साथिहरुलाई । साच्चै जिवन एउटा नाटक जस्तै म एउटा गरीब परिबारमा जन्मेकाले लालन पालन गर्न निकै कठिनाई नै थियो र एउटा (मलाह) माछा मार्ने परिवारमा जन्म लिई आज यो मंजिल सम्म पुग्नुमा म भाग्यशाली नै ठान्छु सर ।
- कसरी तपाई यहाँ सम्म पुग्नु भो ?
सर मलाई सानै देखी नै गायन क्षेत्रमा रुचि भएकोले म दिन रात गायनको रिहलशल गर्दै गायन शिक्षाको लागी म छिमेकी देश भारतमा गई २ बर्ष सम्म शिक्षा हासिल गरे ।
- तपाई दिल्लीमा दुई वर्ष सम्म म्युजिक शिक्षा गर्नु भो ?त्यहा के –कस्ता अप्ठाराहरु भए ?
त्यहाँ मलाई नेपाली भनेर धेरै हेपाई सहे कति दिन त भूख पियास नै बस्नु पर्यो त्यहा । मेरो एउटै लक्ष्य थियो त्यो लक्ष्य अनुसार हामी लक्ष्यको सहारा लिई अगाडी बढे । र आज सफलताको शिखर सम्म पुगे ।
- तपाई दर्शक माझ लोकप्रिय कसरी हुनु भो ?
म अहिले सम्म समाजमा भए गरेका घटना तथा समाजका चेतनाका लागी समय सापेक्ष गितहरु गाई दर्शक तथा समामा लोकप्रियता कमाएको बताए ।हाल सम्म १६ वटा एल्बम र १ सय भन्दा बढी गितहरु गाएका छु ।मधेश आन्दोलन लगायतका गितहरु गाएका हु म ।
-अन्तमा के भन्न चाहन्नु हुन्छ दर्शकहरुलाई यो अनलाईन मार्फत ?
सब भन्दा पहिलो म यो पूर्वाञ्चल एक्सप्रेस डटकम लाई धन्यबाद दिन चाहन्छु । बिशेष गरी र्दशक तथा काका काकी आमा,बुबा भैया और भाबीहरुलाई यसरी नै मलाई माया गर्नु हुन अनुरोध गर्दछुु । साथै आर्शिवाद दिई मलाई होस्ला बढाई दिनु हुन आग्रह गर्दछु र मेरो गितहरु युटबमा प्रमोद पिया टाईप गरी खोज्दा भेटिन्छ ।